Oromia: Weellisaa Kadir Martuu maa’ikalaawwiitti hiraarfamaa jira;ilmaan Oromoo ukkaamfaman hedduunis maa’ikalaawwii dhiphisanii jiran - Ayyaantuu News
Oromia: Weellisaa Kadir Martuu maa’ikalaawwiitti hiraarfamaa jira;ilmaan Oromoo ukkaamfaman hedduunis maa’ikalaawwii dhiphisanii jiran Kadir behind the bar
(Qeerroo, Finfinnee, 18 Hagayya 2012) Yeroo dheeraaf eessa buuteen isaa dhabamee kan jiru, Artisitiin Oromoo beekamaa fi jaalatamaa Kadir Martuu mana hidhaa Maa’ikalaawwii keessatti hiraarfamaa akka jiru saaxilame.
Oduu mana hiraarsaa Maa’ikalaawwii keessaa Qeerroo dhaqqabe akka saaxilutti,wallisaa beekkamaa Artiistii Oromoo Kadir Martuu lukkeelee fi basaasota Wayyaanee Biyyaa Sudaan keessa jiraataniin qabamee mana hidhaa Sudanittii darbatamee ture.
Artisitiin kun yeroo dheeraaf erga ergaramaa tureen booda basaasota Wayyaaneetti kennamee akka hiraarsaa saaxilamu godhame.
Akka Seera baqattummaa addunyaatti namni dahannaa siyaasaa gaafate tokko fedhii isaa malee gara biyya irraa baqateetti deebifamuu hin qabu.
Haata’uutii, hireeen baqattoota Oromoo bakka iyyuutti fedhii isaanii malee biyya keessaa baqatanitti humnaan deebifamaa jiraachuu kan dhiyeenyatti hubachiise humnaan butamuu fi ukkaamfamuun Kadir Martuu haga yeroo odeessi kun argameetti achi buuteen isaa dhabamee ture.
Akka odeessi maa’ikalaawwii keessaa argame kun dabalee hubachiisutti, Kadir Martuu erga Sudaan irraa gara Mana Hidhaa biyyaattii kan ilmaan Oromoo irraattii gochi dhala namaa irraattii hin dalagamne dalagamu, mana Hidhaa Maakalawii keessatti tumamaa fi hiraarfamaa jira.
Yeroo ammaa kanas qaamni isaa hedduu miidhamee kan jiru yoo ta’u, waa’ee isaa akka nmni biraa hin argineef dhoksaatti hidhanii akka jiran beekamee jira.
Ilmaan Oromoo hedduunis kanneen biyyoota akka Somaalii laandi, Jubutii fi kanneen biroo keessaa humnoota tikaatiin ukkaamfamanii deebifaman mana hidhaa maa’ikalaawwii keessatti gochaan gara jabinaan guutame irratti raawwatamaa akka jiru beekameera.
Dhimma kana irrattis Liigiin Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa baatii Guraandhala 2012 keessaa ibsa baasee fi ergaa pirezidaantii Sudaan, Omar AlBashiritti ergeen baqattooti Oromoo gara 15 caalan baatii humnaan qabanii mootummaa Itoophiyaatti kennamuun kan isa yaaddesse ta’uu ibsuun, keessaayyuu kannneen dahannaa siyaasaa gaafatan biyyatti humnaan deebisuun seera addunyaa kan cabse ta’uu isaa ibsuun, yoo Itoophiyaatti deebifaman, tarii, torturii fi hiraarsaan jabaa isaan mudachuu akka malu yaadachiisuun isaa kan yaadatamuu dha.
8 comments - What do you think? Posted by admin - 18/08/2012 at 10:22 pm Categories:
8 Responses to “Oromia: Weellisaa Kadir Martuu maa’ikalaawwiitti hiraarfamaa jira;ilmaan Oromoo ukkaamfaman hedduunis maa’ikalaawwii dhiphisanii jiran”
obsaa says:	19/08/2012 at 6:08 am	Habashoota qofa osoo hintaane biyyoonni ollaa keenyaa kan akka sudaan, Somaalee -laandi, Jibuutii, …ilmaan Oromoo irratti yakka hedduu dalagaa turanii;dalagaas jiru. Kuni kan mul’isuu gama dippilomaasiitiin dhaabbileen siyaasa Oromoo hojii gahaa akka hojjechaatti hinjirre dha. Ittihaayaadnu. Akkuma diinonni keenya biyyoota ollaa irraa tumsa argatan nutis haala itti tumsa argannu irratti hojjechuu qabna.
Beka Biyya says:	19/08/2012 at 8:51 am	Tolee Oduu gaarii nutti himtan. Baay’ina diina keenyaa waliin. Kan nama dhibu garuu baay’ina diinaa miti, kan nuyi mataan keenya akka abbaa dhimmatti ofiratti hojjachaa jirru malee. Yeroo gurbaan kuni Suudaan keeysatti qabame jedhamee Gaazexxessoonni VOA fi baqattoonni Suudaan jiraatan kan dandayan godhan midiyaan Oromoo fi Oromoonni biroo kanneen haga tokko ummata waa dhageeysisuu dandayan sagalee isaanii hin dhagayamne. Dhugaadha dhimmicha humna yeroo ammaa Oromoon qabuu ol tayuu ni mala. Gaaffiin jiru kan dandeenyu hin gooneedha. Ergasuu, aadaa warreen Abashaa irraa dhaallee kan awaalla oowwisuu kanaan maaf mataa wal dhukkubsina saba koo? Kadiir Martuu fi Oromoota isa fakkaataniis Waaqayyo haa dirmatuuf.
Beka Biyya says:	19/08/2012 at 8:54 am	Sirba isaa midiyaa irratti facaafnee ulee itti jabeeysuu, safuu!!!
Gadaa says:	19/08/2012 at 9:00 am	Waan hedduu Nama gaddisiisudha. Yeroo biyya ollaatti baqate waan dararama diinaa jalaa ba’e itti fakkaatee komii Wayyaannee irratti qabu media irratti ba’ee balaaleffachuun isaa dararama caaluuf isa saaxilee jira. Nu akka Oromootti homaa gochuu dadhabuun keenya salphina guddaadha.
Furata Alemayehu says:	19/08/2012 at 11:31 am	Waaqni nama hojii nu haagodhu.Irra guddaan ilmaan Saba keenyaa hojii hin barre oduu barreerra.Mee Waaqni sinitti haa garsiisu dhala namaa keessattuu daa’imman cubbuu hin qabne manni duubaan itti cufamee ibiddi itti shidamee biyya itti baqatan keessatti ibiddaan dhuman warri nuti Oromodha ofiin jennu kan hiriira baanee Mootummoota Aangawoo Addunyaa dhageessisuu dandeenyu gochuu hanqachuu caalaa salphinni tokko illee hin jiru.Inni ta’aa jiru ukaamsanii biyyatti deebisuun gidiraa lafa irratti hin jirre agarsiisaa jiran dabalatee kanuma akka Kadirfaa fi fakkaattota akkasiif iyyuu hanqachuun warra biyya halagaa hiriira baanee gidiraa baqattoota Oromoo irratti raawwachaa jiru kana saaxiluu hanqachuun hoolaa gaafa qalamtu qofa samii argituu mitii warra otoo jiruu du’e waliin wal-nu qixxeessa.
Moortaar says:	19/08/2012 at 12:33 pm	Oromoon wayitii ammaa kana dhaaba siyaasaa akkasumas jaarmiyaa ka biraa mirga ummatichaaf falmu akka hinqabaanne sirriitti argaa jirra. Akkuma bara Minilikii II fi bara Hayilesillaasee diinonni keenya waan barbaadan nurraan gaa’aa jiru. Maali rakkoon keenya? Maali ummanni dadhabaa fi sodaataan akkanaa? Kun dafee sirraa’uu yoo baate carraan ummata keenya gara fuulduraatti mudachuu danda’u sodaachisaa dha.
saaqaa says:	21/08/2012 at 1:43 am	aboo waan nama gaddisiisu akkamiiti? namni facebook irratti AMY MAM SIIF jedhamtu maal abbaa keef oduu sobaa akka labsite osoo ibsitee gaari taha. namoonni facebook fayyadamtan namni kun farra ilmaan Oromoo tahuu baraa!!!
islaamummaan nageenya says:	05/09/2012 at 4:55 am	waan nama gaddisiisu yoomumaa garaan nu gubachuu dhiisa ilmaan oromoo